Jiangyin Meiyuan Industrial Co., Ltd. waxaa la aasaasay 1988, waxaa ka go'an HVAC/qaboojiyaha cajalad gaar ah, tayo sare leh dahaarka isku darka tayo sare leh, biraha aluminium dahaarka milicsiga laba dhinac leh wax soo saarka iyo iibinta. Shirkaddu waxay ku taallaa dhul -biyoodka Wabiga Yangtze Delta, oo ah aagga ugu dhaqaalaha badan Shiinaha. Waxay u dhowdahay Wabiga Yangtze ee woqooyi iyo Shanghai ee koonfurta, oo leh gaadiid ku habboon.
Cajaladda dhejiska ee Meiyuan waxay dabooshaa saddex taxane oo koollo ah oo ku saleysan koollo, emulsion - koolo acrylic ku salaysan iyo koolo caag ah oo la isku qurxiyo. Qalabka aasaasiga ah ee cajaladda biraha aluminiumku waa bireed aluminium saafi ah, bireed aluminium ah oo PET ka kooban, galaas aluminium ah oo ka kooban fiber, aluminium la xoojiyay dahaarka, dahaarka isku -dhafan iyo wixii la mid ah, oo buuxin kara shuruudaha dalabka ee cimilo kala duwan, noocyo kala duwan gobollada iyo heerkulka dalabka ee kala duwan.
Badeecadaheena waxaa si weyn loogu isticmaalaa ilaalinta kuleylka, dahaarka kuleylka, qaboojiyaha, qalabka guriga, elektiroonigga, wax soo saarka gawaarida, dhisidda maraakiibta, korontada, dhismaha, baakadaha warshadaha iyo warshadaha kale.
Ka dib sanado badan oo uruurin iyo horumar ah, shirkaddu waxay aasaastay shabakad suuqgeyn oo waddanka oo dhan ah. Shirkaddu waxay noqotay mid ka mid ah shirkadaha caanka ah ee ku jira warshadaha cajaladda dhuunta ee Shiinaha, dakhliga iibka sanadlaha ahna wuxuu sii wadaa inuu si joogto ah u koro. Marka la eego iibinta dibedda, alaabada shirkadda ayaa loo dhoofiyay Waqooyiga Ameerika, Yurub, Koonfurta Ameerika, Koonfur -bari Aasiya iyo gobollada kale, waxay ku raaxeystaan ​​sumcad wanaagsan.
Shirkaddu waxay maalgelisaa lacag badan sannad walba si ay u sii waddo horumarinta tiknolojiyadda iyo soosaarka alaabta cusub, si ay si joogto ah u curiso hal -abuurka iyo horumarka si loo daboolo suuqa iyo baahida bulshada. Shirkadda waxaa ku qalabeysan taxane ah qalab wax soo saar otomaatig ah, cilmi baaris sare iyo qalab horumarineed iyo qalab tijaabo oo tayo leh, hordhaca tiro aad u badan oo cilmi baaris heer sare ah iyo shaqaale horumarineed, iyadoo si adag loo raacayo heerarka nidaamka maaraynta tayada caalamiga ah ee ISO9001, si loo hubiyo in badeecaduhu waxay la kulmaan heerarka caalamiga ah.
Shirkadaha u hoggaansamaya “badeecadaha tayada leh, qiimaha la doorbiday, macaamiisha qanacsan” falsafadda ganacsiga, si kal iyo laab ah ayay u soo dhoweynayaan macaamiisha gudaha iyo dibaddaba si ay uga wada shaqeeyaan horumarka guud, abuuraan mustaqbal wanaagsan.
Wejiga Labaad ee Xoojiya Aluminium-ka Wajahaya, Sidee u Kululaan Kartaa Cajaladda Fiilooyinka Aluminiumka, Sharooto, Intertape Polymer Group Aluminium -bireed, Aluminium -bireed -Muraayadda Muraayadda Muraayadda, Fiilooyinka Aluminium ee Hal-dhinac leh,